Ahoana No Fomba Hanivanan’i Iràna Ny Aterineto? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Novambra 2017 8:06 GMT
Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny Jona 2005
Vao avy nandefa tatitra vaovao ny OpenNet Initiative sy ny Berkman Center:
Indro ny famintinana:
Nandany ny iray tamin'ireo fitsipika mikasika ny fanivànana aterineto izay tena henjana indrindra erantany i Iràna. Iràna, miaraka amin'i Shina, dia tafiditra ao anatin'ny vondrona kelin'ireo firenena nampiharana ireo fitsipika mifehy ny fanivànana tena raitra indrindra erantany. Nanaiky io fitantanana midadasika miaro sivana io i Iràna tao anaty fotoana iray izay tena nampidangana be tsy nisy ohatran'izany ny fampiasana ny aterineto nataon'ireo olom-pireneny sy ny fitosahan'ny fanoratana betsaka loatra tamin'ny fiteny farsi tety anaty tambajotra. Araka ny voalazan'ity tatitra ity, io fitantanana raitra mikasika ny fanivànana Aterineto iraniana io dia anisany fironana izay navoakan'ny fikarohan'ny OpenNet Initiative momba ireo firenena mifantoka amin'ny fanakànana ny fanehoana hevitra amin'ny fiteny eo an-toerana, toy ny Farsi, ary miaraka amin'ny fijerena manokana ny fanampenam-bava ny zavatara izay afaka avoaka amin'ny alàlan'ny fampiharana mora vidy st malaza, toy ireo weblogs..
Mba hampandehanana tsara ny fitantanana fanivànana misy ao aminy, anatin'ireo firenena tsy mitsaha-mitombo isa koa i Iràna mazava ho azy, indrindra fa any amin'ny faritra ao Afovoany Atsinanana izay miankina amin'ireo rindrambaiko ara-barotra vokarina avy any amin'ireo orinasa amerikana mampidi-bola . Vao haingana i Iràna no nanaiky, araka ny fanamafisan'ireo fisedràna nataonay, fa izy dia mampiasa ny SmartFilter, rindrambaiko fanivànana vidiana – namboarin'ny orinasa amerikana Secure Computing – ho toy ny atidoha ara-teknika voalohany ao amin'ny rafitra fanivànany. Namboarina io rindrambaiko vidiana io mba ho ampahany amin'ny rafitra iraniàna fanivànana hanakanana ireo vohikala amin'ny fiteny anglisy apetraka any ivelany sy ireo vohikala amin'ny fiteny eo an-toerana.
Ny SmartFilter, sahala amin'ireo rindrambaiko fanivànana rehetra amidy, dia manana fironana mankamin'ny fanakanana tafahoatra, amin'ireo fahadisoana, ary amin'ny tsy fahampiana mangfarahara tanteraka. Raha ny marina dia avoakan'i Iràna ho an'ny orinasa amerikàna iray any ivelany ny fandraisana ireo fanapahankevitra marobe mikasika izay azon'ireo olom-pireneny idirana ao amin'ny aterineto, izay ahazoany tombony amin'ny firaisan'ny tsikombakomba ao anatina fitantanana tahàka izany.
Tsindrio eo ambany mba hanohizana vakiteny…
Nasehon'ireo andrana nataonay fa mora bahanana kokoa ny votoaty amin'ny fiteny Farsi aty amin'ny tambajotra raha oharina amin'ilay amin'ny fiteny Anglisy. Vohikala miisa 499 amin'ny 1477 no hitanay hoe voabahana tamin'ireo nanaovana andrana (34%) tao anatin'ny andiana andrana nataonay ny volana Novambra 2005, ary vohikala 623 amin'ny 2025 nanaovana andrana (31%) voasivana tao anatin'ny andiany tamin'ny volana Desambra. Tena nobahanan'ny Fanjakana Iraniana ny fahazoan'ireo olompireneny miditra amin'ny tambajotra amin'ireo vohikala marobe misy sary vetaveta, amin'ny alalan'ireo fitaovana tsy mitonona anarana (izay mamela ny mpanao aterineto hivezivezy tsy misy mpahita ao amin'ny aterineto ), anatin'ireo tranonkala marobe misy votoaty ho an'ireo pelaka lahy sy vavy ary ireo ny sasantsasany amin'ireo tranonkala sarpoady ara-politika, tranonkala miresaka zon'ny vehivavy, ary ireo Web sasany kinendry (“blogs”), ankoatra ireo tranonkala hafa.
Ny fitantanana ny fanivànana ao Iràna dia tohanan'ny andiana lalàna goavana izay manara-maso ny famoahana ny vaovao saropady. Nogiazana tamin'ny alalan'ny fehezana lalàna mifandray amin'ny resaka media ny gazety, indrindra fa ilay Lalàna Mifehy ny Asa Fanaovana Gazety nivoaka tamin'ny 1986, izay ahitana ny fanomezana alàlana sy ireo fitsipika fototra. Ireo olona izay te-hisoratra anarana any amin'ireo mpanome etolotra aterineto (FAI) dia tsy maintsy manao fanekena an-tsoratra mba tsy hiditra amin'ireo tranonkala “tsy silamo”. Mandidy an'ireo FAI ny lalàna mba hametraka rafitra fanivànana izay maharakotra ny fidirana amin'ireo tranonkala Web sy ny imailaka. Mety ho henjana ny sazy ho an'ireo fandikana ny lalàna momba ny votoaty.
Ahitana ireo toetra sasantsasany mampiavaka azy ny fandaharanasa mitovitovy amin'io manerana ny faritra Afovoany Atsinanana ny fitantanana fanasivànana ao Iràna, toy ny tsindry atao amin'ny fanakanana ireo vohikala marobe Web misy sary vetaveta. Ireo endriksa hafa sasantsasany amin'ny fanivànana ao Iràna – tahaka ilay natao ho fitiliana ireo blaogy amin'ny fiteny Farsi tsy mitsahatra mitombo be – mametraka azy hiavaka tsy hitovy amin'ireo Fanjakana hafa ao Afovoany Atsinanana. Ireo andrana nataonay nandritra ireo vanim-potoana maro isankarazany, anisan'izany ireo angona anatin'ity tatitra ity sy ireo angona navoaka tany aloha tao anatin'ny asan'ny ONI, dia mampiseho ny habetsahan'ny fibahanana misy amin'izao fotoana ao Iràna, ao anatin'izany ireo fibahanana fanampiny any anatin'ireo faritra sasany misy votoaty ary ireo fanenana ny fanivànana any amin'ny hafa.
10 ora izayAmerika Avaratra